Single Frequency Laser Fiber - Connet Laser Technology Co., Ltd
Connet Laser Technology waa kan keliya in industry in si madax-bannaan loo horumariyo karaa "ruxruxo safarka saabka filaayo" nooca iyo "warcelin qaybiyey saabka toosan (DFB)" class Khz inta jeer hal laser fiber. Waxaan leenahay xuquuqda hantida aqooneed ee si buuxda oo madax banaan ee China, labada nooc ee laser fiber-hal inta jeer waa mid gaar ah ee awooddooda ay ku daboolaan baahida-sax sare Satlaytaka fiber optic, isgaarsiinta isku xidhan, LIDAR, iyo cilmi sayniska.
Awooda wax soo saarka ka mid ah CoSF-R iyo CoSF-D-hal abuur inta jeer fiber laser waa on amarka of mw. Iyadoo-awood sare cidhiidhi-linewidth kordhiyo fiber ku filaayo in ay Connet, oga kartaa wax soo saarka awoodda heerka boqol-watt ah.
CoSF-R filaayo in safar saabka ruxruxo inta jeer hal laser fiber
The CoSF-R laser fiber-hal inta jeer ee ay ansixiyeen gaar ah "filaayo in safar saabka ruxruxo" design, oo tiraa arrin dalool-gubanaya ruxruxo taagan oo waa u fududahay in ay ka dhacdo laser fiber saabka toosan. Thanks to bandwidth aalladda cidhiidhi filter oo dhan-fiber loogu talagalay by Connet, iyo technology gacanta kala fogaansho u gaar ah in ay meesha saamayn fogaansho dalool-gubeen, CoSF-R ayaa kala fogaansho ah oo deggan toosan, hab gaadhya hal, iyo wax soo saarka laser Single-noqnoqoshada la linewidth dhab cidhiidhi ah, hoos xataa <1kH.
laser CoSF-R low-buuqa linewidth aalladda cidhiidhi ah fiber-hal inta jeer ee uu leeyahay qaab ciyaareed aad u fiican, iyo wax soo saarka linewidth spectrum indhaha uu ka yar yahay Khz, iyagoo sanqadh wajiga aalladda hooseeyo.
CoSF-D nooca warcelin qaybiyey nooca saabka toosan (DFB) inta jeer hal laser fiber
laser The CoSF-D fiber-hal inta jeer ee ay ansixiyeen ah "qaybiyey saabka toosan-celinta (DFB)" design been-sax sare qalabka fiber wajiga wareejiyay dhulka dhif fiiloyin firfircoon doped, hubinta FSR of GHz by design gaaban saabka si toos ah, awood ah doorashada ee hal wax soo saarka ah hab gaadhya.
laser The CoSF-D fiber-hal inta jeer ee uu leeyahay qaab fudud oo ay fududahay in la kobo in ay ogaadaan muddo dheer wax soo saarka hal noqnoqoshada deggan hal gaadhya kala fogaansho toosan la isku halaynta sare. Connet leeyahay technology ugu muhiimsan ee DFB wajiga-wareeg iyo shabaggeedii-soo-saarka. Iyadoo sano cilmi-adag iyo horumarka, waxaa ku siin kara "qaybiyey saabka toosan-celinta (DFB)"-hal noqnoqoshada laser fiber ku dhow Milanello kasta oo 1.0um, 1.5um iyo 2.0um guutooyinkii.